मलाई बिर्सनुहोस् बुटिकको भ्यालेन्टाइन डे पार्टी • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
मलाई न बुटिकको भ्यालेन्टाइन डे पार्टी बिर्सनुहोस्
घटनामा फेब्रुअरी @ @ १०:०० बिहान
At मलाई होइन बुटिक बिर्सनुहोस्
अनुरोध मलाई होइन बुटिक बिर्सनुहोस् भ्यालेन्टाइन डे रमाईलोको लागि डाउनटाउन डचटाउन र विशेष अफरहरू जब तपाईं किनमेल गर्नुहुन्छ!
शिप गर्न केहि चीजको आनन्द लिनुहोस् जब तपाईं आफ्नो शक्तिको भण्डार गर्नुहुन्छ र चकलेटमा तपाईंको उर्जा कायम राख्न सक्नुहुन्छ। बिर्सि Me मिट गिफ्ट टोकरीमा विजयी गर्न ड्रई Enter प्रविष्ट गर्नुहोस्। र तपाईं नि: शुल्क उपहार र्यापि ofको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र purchase १० वा तपाईंको अधिक purchase or० वा अधिकको खरीदमा पाउनुहुनेछ।
मलाई बिर्सनुहोस् बुटिक फेब्रुअरी १ ​​on को बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म खुल्ला छ, र तपाईं जहिले पनि सक्नुहुन्छ अनलाइन पसल धेरै।
१०:०० बिहान –: ०० बजे
स्थान: मलाई होइन बुटिक बिर्सनुहोस्
4213 भर्जिनिया Ave.
सेन्ट लुइस, MO 63111
आयोजक: मलाई होइन बुटिक बिर्सनुहोस्
अघिल्लो घटना: माटोको खुल्ला कार्यशाला
अर्को घटना: क्ले मिति रात
तल दायर गरिएको बिक्री. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, र बिक्री. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस घटना साझेदारी गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल.
DutchtownSTL.org घटनाक्रम बिक्री मलाई न बुटिकको भ्यालेन्टाइन डे पार्टी बिर्सनुहोस्